Showing ६१-७० of ३,७०८ items.
बच्चालाई हुने आरओपीको उपचार विराटनगर आँखा अस्पतालमा सुरु
विराटनगर/ बालबालिकामा हुने आँखासम्बन्धी रोग ‘रेटिनोप्याथी अफ पिम्याच्युरोटी’ (आरओपी) को उपचार विराटनगरस्थित आँखा अस्पतालमा सुरु भएको छ । समय नपुग्दै जन्मिएका बच्चामा लाग्ने रोगलाई ‘आरओपी’ भनिन्छ । समय नपुगी जन्मेका बच्चाहरूको आँखामा आरओपीको समस्या देखिन थालेपछि यसको उपचार सुरु गरेको अस्पतालका सुपरिटेण्डेण्ट डा. रक्षा पन्तले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सामान्यतया गर्भ रहेको ९ महिना पूरा भएपछि बच्चाको जन्म हुन्छ तर, सबै बच्चा ९ महिना पूरा भएपछि नै जन्मन्छन् भन्ने हुँदैन । कतिपय बच्चा समय नपुग्दै जन्मिन सक्छन् । कहिले सात–आठ महिनामा त कहिले ६ महिनामै पनि बच्चा जन्म
बुटवलमा आईसीयूमा उपचाररत काेराेना संक्रमित भागेर हेटलमा कफी पिएपछि...
ब्लाष्टखबर । बुटवलका काेराेना संक्रमित आईसीयूबाट भागेका छन् । बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालकाे आईसीयूमा उपचाररत बुटवल १३ का ५५ वर्षीया पुरुष आईसीयूबाटै भागेकाे अस्पतालका प्रवक्ता डा. गौतमले जनाएका छन् । उनका अनुसार अाज बिहान शौचालय जान्छु भनेर हिडेका थिए । अस्पतालको कपडा र चप्पलसहित सम्पर्क बिहिन भएका संक्रमित पुरूष तिलोत्तमाको जानकीनगरस्थित पौवा होटेलमा पुगेर कफी पिएकाे खुलिकाे गौतमतमले बताएका छन् । मानसिक रोगको औषधिसमेत सेवन गर्दै आएका ति पुरूषकाे परिवारलाई पनि यो कुरा जानकारी गराएको अस्पतालका प्रवक्ता गौतमले बताए ।
विराटनगर । पछिल्लो २४ घण्टामा प्रदेश १ मा आज ४१५ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । होमआईसोलेनबाट ३९९, इलाम अस्पताबाट ८, विराट मेडिकल कलेजबाट ६ र मेची अस्पतालबाट १ जना डिस्चार्ज भएका छन् । हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या २६ हजार ७१० पुगेको छ । प्रदेश १ मा आज ४० जना संक्रमित थपिएका छन् । झापामा १२, मोरंगमा १०, सुनसरीमा ९, इलाममा ३, संखुवासभामा २, भोजपुर र सोलुखुम्वुमा १–१ र प्रदेश १ बाहिरका २ जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । झापाको दमक र विर्तामोडमा ३–३, गौरादहमा २, कनकाई, बा¥हदशी, मेचीनगर र स्थानीय तह नखुलेका १–१, मोरंगको विराटनगरमा ७, कानेपोखरी, उर्
वीपी प्रतिष्ठानमा विराटनगरका काेराेना संक्रमितकाे मृत्यु
ब्लाष्टखबर । धरान स्थित वीपी काेइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा विराटनगरका एक काेराेना संकेमितकाे मृत्यु भएकाे छ । मृत्यु हुनेमा विराटनगर महानगरपालिका १२ का ६३ वर्षीय पुरूष रहेकाे प्रतिष्ठानका सह–प्रवक्ता डा. चुरामणी पोखरेलले बताएका छन् । उनका अनुसार बिहिबार काेराेना संक्रमण पुष्टि भइ साेहि दिन प्रतिष्ठानकाे काेभिड अस्पतालमा भर्ना भएका उनकाे अाज बिहान ८ बजेर १० मिनेटमा मृत्यु भएकाे हाे ।
विराटनगर । पछिल्लो २४ घण्टामा प्रदेश १ मा ५१५ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । होमआईसोलेसनबाट ५०१, मेची अस्पतालबाट ५, कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रबाट ४, विराट मेडिकल कलेजबाट ३ र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र न्युरो अस्पतालबाट १–१ जना डिस्चार्ज भएका हुन । हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या २६ हजार २९६ पुगेको छ । प्रदेश १ मा आज ५० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । मोरंगमा १७, सुनसरीमा १४, झापामा १२, इलाम, पाँचथर र ओखलढुङ्गामा १–१ र प्रदेश १ बाहिरका ४ जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मोरंगको विराटनगरमा १३, सुन्दरहरैचा, मिक्लाजुङ, बेलबारी र लेट
मानव शरीर र वातावरणबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ । जसकारण वातावरणमा आएको फेरबदलको प्रभाव हाम्रो स्वास्थ्यमा सजिलै देखिन्छ । अझै जाडोयाममा छालासम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिन्छन् । शरीरको बाहिरी अङ्ग छाला नै भएकाले वातावरणीय परिवर्तनको सबैभन्दा छिटो प्रभाव यसैमा देखिन्छ । तसर्थ, हामीले जाडोयाममा छालामा कुनै पनि समस्या नदेखियोस् भन्नाका लागि छालाको उचित स्याहार–सुसार गर्नुपर्छ । जाडोयाममा छालामा देखिने साझा समस्या जाडोयाममा विशेषगरी सुख्खापनकै कारण छालामा विभिन्न समस्याहरू देखिन्छन् । गर्मीयाममा मोइस्चराइजर हुने छाला पनि जाडोयाममा सुख्खा हुने गर्छ । कतिपय मानिसहरूको छाला प्राकृतिक एवम् वंश
चितवनमा मेडिकल कलेजमा न्युक्लियर मेडिसिन सेवा शुरु
चितवन। चितवन मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्रको अत्याधुनिक र अति विशिष्ट सेवाअन्तर्गत न्युक्लियर मेडिसिन सेवा शुरु भएको छ । अत्याधुनिक स्पेक्ट सिटी मेशिन भित्रिएसँगै न्युक्लियर सेवा शुरु भएको हो । कलेजले यस किसिमको उपकरण नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा पनि अहिले जडानको प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेको छ । अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाजस्ता देशमा समेत सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध नहुने यो प्रविधि आफूले भित्र्याएको अस्पतालका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा डा हरिश्चन्द्र न्यौपानेले दाबी गरे । यस उपकरण जडानसँगै धेरै बिरामीले उपचार लिने काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभरबाट बिरामी आउने उनको भनाइ छ । अस्पतालले उपकरण र जडान गर
विराटनगर । पछिल्लो २४ घण्टामा प्रदेश १ मा १४३ कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । होमआईसोलेसनबाट १२०, कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रबाट १६, विराट मेडिकल कलेजबाट ४, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट २ र न्युरो अस्पतालबाट १ जना डिस्चार्ज भएका हुन । हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या २४ हजार ३९० पुगेको छ । प्रदेश १ मा आज ४३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । सुनसरीमा १४, मोरंगमा १२, झापामा ६, ताप्लेजुङमा २, संखुवासभा र खोटाङमा १–१ र प्रदेश १ बाहिरका ७ जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सुनसरीको इटहरीमा ७, धरानमा ५ र रामधुनीमा २, मोरंगको विराटनगरमा ५, केराबारी
विराटनगर । पछिल्लो २४ घण्टामा प्रदेश १ मा २२३ जना डिस्चार्ज भएका छन् । होमआईसोलेसनबाट १९३, मेची अस्पताल र होटल एशियाटिक आईसोलेसनबाट १२–१२, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बेलबारी आईसोलेसन केन्द्र र विराट मेडिकल कलेजबाट २–२ जना डिस्चार्ज भएका हुन । हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या २४ हजार २४६ पुगेको छ । प्रदेश १ मा आज ४७ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । ४६७ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २४ महिला र २३ पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । मोरंगमा १९, झापामा १५, सुनसरीमा ११, संखुवासभा र प्रदेश १ बाहिर १–१ जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मोरंगको विराटनगरमा १५
विराटनगर । सुनसरीको इनरुवा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका ५ सदस्यलाई मनोनित गरिएको छ । मन्त्रीस्तरिय निर्णयले व्यवस्थान समिति सदस्यहरुमा पर्शुराम यादव, धिरा राई, रामप्रसाद मेहता, ध्रुवनारायण पण्डित, तोयादेवी गिरी पोद्धारलाई सदस्यमा मनोनित गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव अम्विकाप्रसाद चौलागाईले जानकारी दिए । प्रदेश १ जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को दफा ३१ को उपदफा १ अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समिति सदस्य मनोनित गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मनोनित सदस्यहरुलाई सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले इनरुवा अस्पतालको विकास र विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । प्रदेश १ जनस्वास्थ्य ऐनमा